Iindaba -Ithambo lesinyithi lokwakha elinamabali amaninzi kwiinqwelomoya zaseShenzhen liphantsi kofakelo
Amathambo esinyithi esakhiwo sentsimbi (No. 7) e-Shenzhen Airlines Headquarter-Guangdong Honghua Construction Co., Ltd, okanye eHonghua, inoxanduva lokuvelisa kunye nokufakela. Enkosi kwii-Airlines zeShenzhen kunye noKwakha iHunan kwakhona.
Isakhiwo esinomgangatho omnye sisakhiwo esinomgangatho ongaphantsi kuphela. Jonga inkcazo yendlu enegumbi elinye ngolwazi oluthe kratya. Isakhiwo esinemigangatho emininzi siyakha esinemigangatho emininzi, kwaye siqulathe ukujikeleza nkqo ngohlobo lweeramp, izitepsi kunye nelifti.
Esinye sezona zibonelelo zibalaseleyo zokwakha ikhaya elinemigangatho emininzi kukuba indawo yokuhlala iphantse yaphindeka, iphindwe kathathu (kuxhomekeke kwinani lemigangatho) xa kuthelekiswa nomgangatho omnye wendlu eyakhiwe kumhlaba omnye. Ukongeza, ngesigqibo sokwakha ngaphezulu unokwandisa indawo eyadini yakho ngokunganyanzelekanga ukuba wakhe ikhaya elibanzi ukuze ufumane indawo efanelekileyo yokuhlala.
Amakhaya anemigangatho emininzi anikezela ngokwahlulahlula indawo yokuhlala. Kokunye, kwiimeko ezininzi kukho ukwahlukana phakathi kweendawo zokulala kunye nezinye iindawo zokuhlala njengoko uninzi lwegumbi lokulala lithanda ukuba phezulu ngelixa iindawo ezinje ngekhitshi, igumbi lokutyela, kunye negumbi lokuhlala zihlala emazantsi. Ke ngoko awufane uphazanyiswe xa ulele. Kwakhona, izindlu ezinemigangatho emininzi zihlala zibonelela ngeendlela ezininzi ngokokuyilwa kunye noyilo.